Eedaysaneyaashii Iskudayey in ay Dilaan Maxamed Mursal Shiil, oo ay Dacwadi ku Socoto iyo Cadaymo ku Saabsan Cidii Soo Abaabushay. – Rasaasa News
Feb 16, 2010 Eritrea, gamadiid, Jwxo-shiil, sahal, sweden
Iskudaygii dil ee ka dhacay Stockholm bishii August 2009, ee lagula beegsaday Maxamed-Sahal Mursal Shiil, ayaa waxaa ku socotay baadhid uu waday ciidanka boliska Sweden waaxda [Interpol]. Waxaana soo if baxaya in iskudaygii dil ee Maxamed Mursal, laga soo abaabulay Eritrea, ficilkana ay fuliyeen dad degan Yurub.
Koox uu abaabulkeeda ka dambeeyey Jwxo-shiil ayaa ku jidh dilay mudane Maxamed Mursal magalada Stockholm, dambigaas oo ay haatan boolisku gacanta ku hayaan cadeymo ka saaraya shaki in dhacdadaasi ay ka dambeeyeen Maxamed Cumar Cismaan [Jwxo-shiil] iyo Maxamed Ismaaciil Cumar [qaaxo].
Waxaa soo baxaya xaqiiqooyin ah in arinta lagu wax yeeleeyay mudane Mohamed Sahal Shiil, in ay sidan u dhacday; Cadaynta waxaa xaqiijiyay Booliska magaaladda Stockholm ee dalkan boqortooyada Sweden.
Xili fiidnimo ah, saacaduna ku beeganayd sideeda fiidnimo [20:00pm], wuxuu Mohamed Sahal Shiil soo istaagay albaabka Hotelka uu deganaa oo magaciisa la yidhaahdo IBBIS. Halkaa waxay ku balansanaayeen nin magaciisa la yidhaahdo Maxamed Jamac. Xiligii uu Maxamed Jaamac kula balamay in uu Maxamed Sahal Shiil ka soo qaado Hotelka in yar ayuu ka soo dib dhacay.
Maxamed Sahal oo khabar moog ah oo Hotelka hortiisa iska taagan, ayaa wuxuu arkay rag gadoodsan oo ka soo dagaya dhowr baabuur oo ay wateen. Waxaa xagiisa markiiba soo aaday Cabdi Cabdullahi Gamadiid iyo wiil uu Maxamed Ismaaciil Cumar adeer u yahay oo magaciisa la yidhaahdo Muxiyaddiin Cali Xaydar.
Gamaadiid ayaa markii ugu horeysayba ku bilaabay cay iyo aflagaado daan daansi ah Maxamed, oo aan la garanaynin wax ka keenay. Wuxuu gartay in ay doonayaan in ay waxyeeleeyaan wafti Kaalinka 5aad ka socday oo Stockholm joogay, Mohamed Sahal, wuxuu isku dayay in uu Gamaadiid u sharxo sababta uu Sweden u yimid in ay tahay arimo samafal ah, waxa uu ka hadlayana ayna ka qabanin.
Gamaadiid war dambe kama uusan sugin, wuxuu markiiba madaxa kaga dhuftay bir ay u soo dhiibeen Jwxo-shiiladda. Waxaa Mohamed sahal Shiil miyir ugu dambeysay Budh uu Muxiyadiin Cali Xaydar isagana madaxa kaga dhuftay iyo hadalkiisii oo sidan u dhacayay ” Madaxda ONLF qofkii isku daya in uu wax ka sheego, waxaa naga go’an in uusan noolaanin, oo dhulka hoos tiisa galo, sidii Dolal ku dhacday.” Halkaa ayaa Mohamed Sahal Shiil miyir ugu dambaysay.
Hada wuxuu booliska Stockholm sheegay in ay ilaa labaatameeyo dad gaadhaya ay jidh dil u gaysteen mudane Mohamed Sahal Shiil. Qaybaha ay Jugta u gaysteen waxaa u badnaa madaxa, feedhaha, caloosha, waxayna ugu talagaleen in ay dilaan oo ay nafta ka qaadaan.
Boolisku waxaa uu sheegay “waxaa la yaab leh, dadkan waxa ay ka sameeysan yihiin iyo sida ay ugu dhiiradeen in ay gaystaan dembiga intaa la egg iyaga oo jooga Yurub badhtankeed.”
1. Way ogaayeen in Hotelka IBBIS ayna ku soo degin masuuliyiin ka soctay Kaalinka 5aad.
2. wuxuu dhibanuhu u sheegay in uu sweden u yimid arimaha Ururkiisa Samafalka ah, si uu lobby ugu sameeyo iyo waliba in ay dambi uu yahay gacanqaadku kolka Yurub la joogo.
3. Colaad kama dhexaynin Maxamed Mursal iyo Cabdi Cabdulahi Gamaadiid. Waxaa naloo sheegay Maxamed sahal in uu ahaa ninkii uu Gamaadiid u xil saartay bixinta guurka gabadhiisa oo uu Holand uga yeedhay.
Cadaymaha ay Boolisku heleen ayaa waxaa ka mid ah in Cabdi Cabdulahi [gamadiid], la siiyey lacag dhan $5000 si uu u fuliyo fal dambiyeedkan, lacagta qayb waxaa uu ka qaatay xafiiska Xawaalada Kaah Stockholm. $2500 ayaa horumarin loo siiyey falka ka dib Gamadiid ma helin $2500 ee kale, sida uu isagu xaqiijiyey.
Boliska magaaladda Stockholm wuxuu ka warhelay in Cabdi Cabdullahi Gamaadiid uu mudo dhowr iyo labaatan sano ah  deganaa dalka Jarmalka, sidaa darteedna uusan Qaxooti ka dalban karin dalkoodda.
Sidoo kale waxaa la sheegayaa in falkan goor dhaw la soo afjari doono, nimankan falka fuliyeyna maxkamad la soo taagi doono, kuwa abaabulay dambigan ee aan joogin dalalka Yurub in ay waydiisandoonaan in loo soo gudbiyo dalka Sweden.
Dad ka tirsan kooxda Jwxo-shiil, waxay sheegeen “in uu Cabdi Cabdulahi Gamaadiid uu wax ka ogga, dadkii abaabulay dilkii Dr. Dolal, waxaanu ku balanay xigto kasta oo aanahay in aan loo tacsiyeynin dhimashadiisii ka dib si aanu war nooga bixin.”
Ugu dambayn waxaanu isha ku hayn doonaa, idiina soo gudbindoonaa kolba meesha ay marayso dacwada ku socota Eedaysanayaasha uu kiiskooda booliska Sweden gacanta ku hayo.
Bisharo Wacdi Xaqiiqda ka Dambaysa Qabashadeeda?